Kismayo City - Jubbalandi Media
Author Archives: Kismayo City
Kenya oo duqeyn dhanka cirka ah ka bilowday gudaha dalkeeda
Agoosto (21 2017) Sida ay maanta oo Isniin ah ay baahiyeen Warbaahinta Dalka Kenya ciidamada KDF ee dalkaasi ayaa qorsheeyay in ay duqeyn dhanka cirka ah ay ka fuliyaan dhulka keynta ah ee Bonis ee wadankaasi Kenya halkaas oo la aaminsan yahay in Al-Shabaab ay Ku xoogan yihiin. Howlgalkaan ayaa La sheegay in uu ahaan Doono Mid Diyaaradaha Dagaalka ee Kenya ay Bambooyin...
Sheeko Xiiso Leh laba markab oo shil ku galay dekedda Berbera
Agoosto (21 2017) Shilkani ka dhacay Dekedda magaalada Berbera ayaa yimiod kadib markii xalay ay isku dheceen labo markab oo halkaasi ku xirnaa, mas’uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in mid kamid ah labadaasi markab uu waxyeelo aan badneyn gaartay, markii oo dhinac ka dolooshmay. Horumar ballaaran ayaa ka soconaya dekedda magaalada Berber ee Soomaaliland, kadib markii...
Agoosto (20 2017) Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa saakay oo Axad ah waxa uu u ambaxay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Madaxweynaha oo casumaad ka helay dhiggiisa dalkaasi ayaa waxaa garoonka Aadan Cadde kusii dhoweeyay mad’uuliyiin ka tirsan dowladda. Agaasimaha Villa Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo warbaahinta...
Faah-Faahin: Duqeyn ka dhacday inta u dhaxeysa Jilib iyo Kamsuuma
Agoosto (17 2017) Sida ay xaqiijinayaan warar hordhac ah saakay aroortii hore duqeyn adag ayaa ka dhacday deegaan u dhaxeeya Kamsuuma iyo Jilib ee Gobolka Jubbada Hoose. Deeganadan waxaa ku sugan kooxda argagixisadda Al-Shabaab. Weerarkan ayaa la rumeysan yahay in lala beegsaday xarun ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Diyaarado dagaal oo joog hoose ku socda ayaa...
Mukhtaar Roobow “Aniga Al-Shabaab shan sano ka hor ayaan ka baxay”
Agoosto (15 2017) Ku xigeenkii hore ee kooxda Al-Shabab Mukhtaar Roobow oo goor dhow warbaahinta kula hadlay Hoteelka City Palace ee magaalada Muqdisho ayaa cadeeyay mowqfika uu ka jooga kooxda Al-Shabaab oo uu mar u ahaa laf dhabar iyo mas’uul sare. Roobow ayaa yiri “Aniga shan sano ka hor ayaan Al-Shabaab iskaga baxay markaan arkay in aysan dan u hayn shacabka...
Warbixin: Mo Faarax oo dalbaday in loogu yeero hadda kadib magaca Maxamed Faarax
Agoosto (15 2017) Orodyahanka caanka ah ee u orda dalka Britain asalkiisuna yahay Soomaali Mo Farah ayaa sheegay inuu doonayo in hadda laga bilaabo loogu yeero magaca ah Maxamed Faarax. Maxamed Faarax ayaa warkan ku dhowaaqay kahor tartan Maaradoon ah uu dhowaan galayo, waxana uu ku guuleystay bilad dahab ah iyo mid qalin ah tartanka orodka caalamka ee ka dhacay magaalada...
Mucaaradka dalka Kenya oo maanta sheegaya mawqifkooda ku aadan doorashadii dhacday
Agoosto (15 2017) Macaaradka dalkan Kenya oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan NASA ayaa maanta laga sugayaa in ay sheegaan mawqifkooda ku aadan doorashadii ka dhacdya dalka Kenya ee uu ku guuleystay xisbiga Jubilee. Hogaamiyaha Mucaaradka ee Raila Odinga ayaa kol sii horeysay sheegay in Agoosto 15-keeda ay cadeyn doonaan mawqifkooda ay ka taagan yihiin doorashadii...
Faah-Faahin Khilaaf adag ayaa ka dhashay xil ka qaadisitii madaxweynaha Hirshabelle
Agoosto (15 2017) Shalay gellinkii dambe waxaa soo baxday in Xildhibaanno ka tirsan Maamulka Hirshabelle ay sheegeen in ay Kalsoonidii kala laabteen Madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble. Arrintan ayaa waxaa ka taagan Khilaaf ka dhashay Xilka qaadstaasi ayadoo ay hawshan socotoay maalmihii la soo dhaafay oo idil. Xildhibaanno ka tirsan Maamulka Hirshebeelle...
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo mucaaradka ugu baaqay in ay ammaanka ilaaliyaan
Agoosto (15 2017) Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo markii labaad loo doortey hogaanka dalkiisa ayaa ugu baaqay mucaaradka inay sharciga ilaaliyaan oo wax walba ka hormariyaan ammaanka. Sidoo kale Madaxweyne Kenyatta ayaa ugu baaqay Booliska inay si wanaagsan ula dhaqmaan dadka diidan natiijada ka dhalatay doorashadii toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacday dalka...
Aqriso: Af-hayeenka ciidanka xoogga dalka oo la magacabay
Agoosto (15 2017 ) Taliyaha Ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa uu Cabdullahi Iiman Cynte u magacaabay afhayeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, arrintan ayaa timid kadib wareegto xafiiskiisa Taliyaha ka soo baxday, Hoos ka aqriso Wareegtada ...
Baarlamaanka Hirshabelle oo Kalsoonida kala laabtay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble
Agoosto (14 2017) Baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta shaqada ka eryay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullahi Cosoble. Kulan ay shir guddoomineysay guddoomiye ku xigeenka 2aad ee maamulka Marwo Canab Axmed Ciise ayaa waxaa soo xaadiray 76 Xildhibaan, waxaana la bilaabay codeynta mooshinka kalsoonida lagala noqonayo madaxweynaha Hirshabeelle Cali...
Qarax ka dhacay wadada Aada Garoonka diyaaradaha Aada Cadde
Agoosto (14 2017) Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax gaari oo goor dhow ka dhacay wadada aadda garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kaasi oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jirta. Qaraxan ayaa la sheegay in lagu xirey gaari nooca yar yare oo Taksi ahaan u shaqeynayey, waxaana halkaasi ku dhintey darawalkii gaariga kaxeynayey, waxaana...
Soomaaliya iyo South Afrika oo Heshiis ku saabsan ammaanka iyo dhaqaallaha kala saxiixan doona
Agoosto (14 2017) Xubno ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Guddiga Difaaca ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa dalka koonfur Africa kula kulmay xubno metelayay Wasaaraddaha Gaashaandhigga iyo Arrimaha Dibadda ee dalka Koonfur Afrika. Wafdiga Soomaalida ee dalkaa tagay ayaa booqasho lagu geeyay dhismaha wasaaradda gaashaandhiga Koonfur Afrika iyo Xarumo kale oo wadankaa...
Aqriso: Mooshin ka dhan ah madaxweynaha Hirshabelle oo ay gudbiyeen 72 Xildhibaan
Agoosto (14 2017) Mooshin ay ku qoran yihiin magacyada 72 xildhibaan oo Hirshabelle ah, qaarkoodna saxiixan ayaa waxaa loo gudbiyey guddoonka baarlamaanka ee maamulkaasi. Sababta ka dambeysa mooshinkaan ayaa ah xil ka qaadista madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo maalmahan ay ku dheganaayeen xildhibaannada Hirshabelle. Hoos ka Aqriso Mooshinka la saxiixay ...